LIFE IN UK (Lesson7- Technology) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on April 21, 2015 at 11:43 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Fred, Sara နဲ့ သူတို့ရဲ့ တစ်ဝမ်းကွဲညီ David ကင်မရာဝယ်ရန် ဈေးဝယ်ထွက်နေပါတယ်။
TECHNOLOGY - အသုံးချသိပ္ပံပညာ
David: Let’s try this shop. It looks like they’ve got lots of cameras.
David: ဒီဆိုင်ကိုဝင်ကြည့်ရအောင်။ ကြည့်ရတာ သူတို့မှာကင်မရာအများကြီးရှိပုံရတယ်။
Shop assistant: Hello. Can I help you at all or are you happy browsing?
ဆိုင်ဝန်ထမ်း : မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ကူညီပေးရပါမလား? ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် လျှောက်ကြည့်ပါမလား?
Fred: Actually, we’d like some information.
Fred: တကယ်တော့ ကျွန်တော်တော့ အချက်အလက်နဲနဲ သိချင်ပါတယ်။
Shop assistant: Absolutely. What would you like to know?
ဆိုင်ဝန်ထမ်း : မေးလို့ရပါတယ်။ ဘာများသိချင်တာပါလဲ?
Fred: Well… what’s the difference between this camera and that camera?
Fred: ဒီလိုပါ - ဒီဖက်က ကင်မရာနဲ့ ဟိုဖက်ကကင်မရာ ဘာကွာတာလဲသိချင်တာပါ။
Shop assistant: This one isa20MP camera and that one is only 16MP. But the zoom on the 20MP camera is not as good.
ဆိုင်ဝန်ထမ်း : ဒီဖက်တစ်ခုက 20MP ကင်မရာပါ။ ဟိုဖက်ကတော့ 16MP ပဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ 20MP ကင်မရာကအဝေးကိုလှမ်းပြီးရိုက်ရင် ဇူန်းဆွဲလို့ သိပ်မကောင်းဘူးဗျ။
Fred: Hmm… okay. And is the 16MP camera popular?
Fred: ဪ ဟုတ်ပါပြီ။ ပြီးတော့ 16MP ကင်မရာက လူကြိုက်များရဲ့လားဗျ?
Shop assistant: Yes. It’s very easy to use and it takes great pictures.
ဆိုင်ဝန်ထမ်း : ဟုတ်ကဲ့၊ သူကသုံးလို့လွယ်ပြီး ပုံထွက်ကောင်းလို့ပါ။
David: Okay… and does the price include anything else?
David: ကောင်းပါပြီ၊ ရောင်းဈေးမှာ တခြားဘာတွေပါသေးလဲဟင်?
Shop assistant: Yes, you getacamera case andamemory card.
ဆိုင်ဝန်ထမ်း : ဟုတ်ကဲ့ - ကင်မရာအိပ်ရယ် memory card ရယ်ရပါမယ်။
Fred: Sounds good. What do you think, Sara? You should make the decision.
Fred: ကောင်းသားပဲ။ Sara ရောဘယ်လိုထင်လဲ? ညီမပဲဆုံးဖြတ်တာကောင်းပါတယ်။
Sara: Yes, I think I like that one the most. It sounds likeagood deal.
Sara: ဟုတ် - ညီမလဲ အဲဒီတစ်ခုကို အကြိုက်ဆုံးပဲထင်တယ်။ ဈေးတန်တယ်နဲ့တူပါတယ်။
Fred: Okay, we’ll take it!
Fred: ကောင်းပြီ - ကျွန်တော်တို့ ဒါကိုယူပါမယ်။
As in the rest of the world, there has beenahuge surge in the development of new technology in recent years in the UK. From digital cameras to vacuum cleaners, computer games to hospital equipment, advances in technology affect all our lives.
One of the biggest areas of growth in recent years is the development of mobile phone technology. In the UK, almost 90% of adults ownamobile phone. Almost half of these have access to the internet. Most people send text messages or emails instead of letters. Social networking websites like Facebook and Twitter are also very popular.
Technology has also hadabig impact on the way we access television, radio and the newspapers in the UK. People in the UK can watch many television programmes online, whenever it is convenient for them. Many people also read the newspaper online. There has beenabig decrease in the number of people who buy daily newspapers. 13% of adults also now own an ebook reader. Does this mean the end of newspapers and books made of paper?
Schools and universities have to keep up with the changes in the world around them. Children now have regular access to computers at school. Researchers predict that 80% of classrooms in the UK will have interactive whiteboards by 2012. Technological advances have also changed the way that adults learn. Distance learning at university-level is increasingly popular because the internet makes it so easy.
• Almost 93% of the population of the UK use mobile phones.
•3out of4adults shop online.
• There are over 31 million Facebook users in the UK.
Technology facts (အသုံးချသိပ္ပံပညာသိကောင်းစရာ)
- ယူကေရှိ လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ ၉၃% ခန့် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသည်။
- အရွယ်ရောက်ပြီး လူလေးဦးတွင် သုံးဦးမှာ အင်တာနက်မှတဆင့်ဈေးဝယ်ကြသည်။
- ယူကေတွင် Facebook သုံးစွဲသူ ၃၁ သန်းကျော်ရှိသည်။
Image source: Matthew G (https://www.flickr.com/photos/streetmatt/)
to browse (v) - ဟိုဟို ဒီဒီ ကြည့်သည်။
surge (n) - တစ်ဟုန်တိုး တိုးတက်သည်၊ တစ်ရှိန်ထိုး အရှိန်မြင့်တက်သည်။
advance (n) - ပြန့်ပွားလာမှု။ တိုးပွားမှု။ တိုးတက် လာမှု။ တိုးတက်မှု။
growth (n) - ကြီးထွားမှု။တိုးပွားခြင်း။ဖြစ်ထွန်းမှု။ တိုးလာ၊များလာခြင်း။ တိုးပွားလာမှု။ကြီးပွားတိုးတက်မှု။ impact (n) - အကျိုးသက်ရောက်မှု
to keep up (v) - အမီလိုက်သည်၊ ရင်ပေါင်တန်းလိုက်သည်။
distance learning (n) - အဝေးသင်
A. True or false? (မှန်/မှား ဆုံးဖြတ်ပါ)
Example: Only 50% of adults in the UK have gotamobile phone.
FALSE – almost 90% of adults have gotamobile phone in the UK.
1. Sending letters is as popular as sending emails and texts.
2. It is possible to watch TV programmes on the computer in the UK.
3. Fewer people buy newspapers now than in the past.
4. Most schools in the UK do not have interactive whiteboards.
5. In the UK, you can study forauniversity degree in your own house.
B. Scrambled words (ရောမွှေထားသောစာလုံးများအား အစီအစဉ်မှန်အောင်ပြန်စီပါ)
Example: nucomaiomctni = c o m m u n i cat i o n
1. sgmease = m_ _ _ _ _ _
2. lmeovdpetn =d_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. cesacs =a_ _ _ _ _
4. nidsecoi = d_ _ _ _ _ _ _
5. dcipert = p _ _ _ _ _ _
1. False – sending emails and texts is much more popular than sending letters
4. False – most schools do have them; 80% of classrooms will have them by 2012
Permalink Reply by Theingi on April 21, 2015 at 13:36
good idioms for learning
Permalink Reply by Saung Thu on April 21, 2015 at 19:16
I like this lesson .Thanksalot.
Permalink Reply by Ei Toe Zon on July 19, 2015 at 15:36